Ngemuva kwe-chemotherapy kanye ne-mastectomy ephindwe kabili, uthola ukuthi ukutholakala komdlavuza wakhe bekungalungile - Thumela RELAY
Accueil » IMPILO YAMI Ngemuva kwe-chemotherapy kanye ne-mastectomy ephindwe kabili, uthola ukuthi ukutholakala komdlavuza wakhe bekungalungile
Ukwazi ukuthi unomdlavuza webele kungenye yezindaba ezimbi kakhulu, ikakhulukazi uma ukuxilongwa kukhomba ukuthi "akubi kathathu".
I-Aquarius Studio / Shutterstock.com
Uyini umdlavuza webele ongemuhle?
Ngokwesayithi BreastcancerOrg, okuthiwa ama- "triple negative" cancers awunayo i-estrogen receptor, i-prostrogen receptor noma iprotheni ye-HER2. Kwethulwa ku-10 ku-20% yamacala, kuvame kakhulu uhlobo lomdlavuza onolaka ngokwengeziwe.
Ngesikhathi eseneminyaka engu-25, uSarah Boyle wafunda ngokukhathazeka ukuthi wayenenkinga yomdlavuza webele ongemuhle. Lezi zindaba ezimbi zawa e2016 ngenkathi esesibhedlela iRoyal Stoke University kungekudala nje kokuzalwa kwengane yakhe yokuqala.
Yansuku zonke StokeSentinel kwembula ukuthi uSarah wayengenakho ukukhetha ngaphandle kokubhekana nalesi sifo: waphathwa i-chemotherapy kanye ne-masectomy ephindwe kabili ukuvikela ukubhebhetheka komdlavuza.
Kwakungekho kuze kube nguJulayi 2017 lapho odokotela esibhedlela babona khona iphutha elikhulu: i-biopsy kaSara yayirekhodwe kabi futhi lona wesifazane osemusha akazange ahlaselwe ngumdlavuza. Waxoliswa ngalokhu kudideka okungathi sína, kodwa uSarah wayekhathazeke kakhulu ngemiphumela engaba khona yokuphathwa okunzima okwakudingeka akwenze.
Ngokwesaba, ngokwesibonelo, ukuthi ukufakelwa ibele lakhe kuzomchaya isikhathi eside engcupheni enkulu yokuhlushwa umdlavuza, ingasaphathwa eyokuhlukumezeka kwengqondo kokuhlolwa okunjalo.
Ubuye waveza nezinye izingqinamba ezibangelwa yizo zonke lezi zinqubo ezingenamsebenzi, njengokuthi angakwazi ukuncelisa ingane yakhe izinyanga ze-7.
USarah uchaze lokhu okuhlangenwe nakho ngokuthi "kunzima kakhulu":
Ukwazi ukuthi nginomdlavuza kwakunzima kakhulu, kodwa ukubekezelela konke ukwelashwa nokuhlinzwa okwakutshelwa kamuva ukuthi kwakungadingeki kwaba buhlungu.
Wachaza ukuthi ufuna ukuxoxa ngendaba yakhe ngethemba lokuthi akekho omunye umuntu ozobekezelela into efanayo.
Amanye amathiphu wokuxhasa othandekayo onomdlavuza
Kunzima ukwamukela ukutholakala komdlavuza. Uma omunye wabathandekayo bakho ehlushwa yilesi sifo, kungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi ungasisiza kanjani. Nawa amanye amathiphu avela kusiza I-WebMD:
Zilungiselele ushintsho lwemizwa nokuziphatha kulabo abahluphekayo;
Bakhuthaze ukuba bahlale bekhuthele futhi babanakekele ngangokunokwenzeka;
cela amanye amalungu omndeni ukuthi enze okusemandleni ukusiza, noma ngabe kulalela nje.
I-Afrika Studio / Shutterstock.com
Ukuxilongwa kukaSara bekungalungile, kepha izinkulungwane zabantu ziyahlaselwa yilokhu kugula futhi zidinga lonke uxhaso ezingakwazi. Uma othile emndenini wakho ekulesi simo, zama ukuba khona.